Android လုလင်: August 2014
ဘာလာလာ Unlock လုပ်ပေးမယ့် Huawei Unlocker
Huawei ဖုန်းတွေမှာ Network တိုင် 1x ပဲတက်ပြီး 3g မတက်ဖြစ်နေတာတွေ ၊ Block5မှားရေးမိလို့ သုံးရောင်ခြယ်တက်တာတွေ ကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် Huawei Unlocker Tool ဖြစ်ပါတယ်။ Huawei ဖုန်းတွေကို Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Network Unlock/Relock ရမယ်။ Official နည်းဖြစ်တဲ့အတွက် Error ကင်းမယ်။ 1x ပဲတက်ပြီး 3g မပေါ်တာတွေမဖြစ်သလို ဖုန်းပျက်မှာလဲမစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူး။ ဒီ Tool လေးကိုရေးသားထားသူကတော့ Developer ကိုကျော်စွာသွင် ဖြစ်ပါတယ်။ Huawei Unlocker ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 4:09 PM5comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ repair tools
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး MPT SIM Card များကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လက်လီ အရောင်းဆိုင်များ တွင် ဝယ်ယူရရှိ နိုင်တော့မည်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး များကို စက်တင်ဘာလတစ်ရက်နေ့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားသည်။
ရောင်းချပေးမည့် မြို့နယ်စာရင်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 7:54 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
by Adeel Inam
CONGRATULATIONS! You got yourselfanew boot animation. If you found this tutorial useful don’t forget to share this post and like us on Facebook.
ရေးတဲ့အချိန် 3:50 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ Boot animation လုပ်​နည်း
Coolpad 7269 ကို cwm mode ၀င်​နည်း
Coolpad 7269 ကို cwm mode ၀င်​နည်း​လေး​ပြောပြ​ပေးမှာဖြစ်​ပါတယ်​။
ကျ​နော်​ အန်းထွိုက်​လုလင်​ကိုယ်​တိုင်​တိုင်​ပတ်​ခဲ့ရတဲ့ Coolpad 7269 ပါဗျာ။
ဘယ်​ရမလဲ ဒီကလဲ Android လုလင်​ပဲ​နော့
သုံးခု​ပေါင်းနိုပ်​ လို့မရရင်​ တစ်​ခုနိုပ်​ပြီး တစ်​ခုနိုပ်​ ​နောက်​တစ်​ခုနိုပ်​ အမျိုးမျိုးနိုပ်​ရတာ​ပေါ့ဗျာ
​ယောကျာင်္းပဲ ကြိုးစားရင်​ဘုရား​တောင်​ဖြစ်​တာပဲ​နော့ :-)
ဟဲ စကား​တွေ​လည်း ​ဖောင်း​နေပြီ
ဘ​လော့မှာပို့မတင်​ရတာကြာလို့ ချစ်​ပရိသတ်​ကြီးများ ​မျော်​​နေကြပြီလားမသိဘူး​နော်​ ခ်​ခ်​
ကဲ Coolpad 7269 ကို cwm ၀င်​ရ​အောင်​
Volume up+down+power ခလုပ်​သုံးခုကိုတွဲနိုပ်​ပါ။
Wo ဆိုတဲ့ logo မှာ recovery mode ဆိုပြီး​ပေါ်လာပါမယ်​။
ပြီးရင်​ စက်​ရုပ်​​လေး ပက်​လက်​လန်​ပြီး​ပေါ်လာပါမယ်​။
အဲဒီအခါမှာ Home ကို တစ်​ချက်​နိုပ်​ပါ။
ရပါပြီ cwm mode ​ရောက်​ပါပြီ
ရေးတဲ့အချိန် 10:41 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ Coolpad cwm
Myanmar,Root,Keyboard တစ်ခါထဲထည့်သွင်းပေးမည့် Boot Img လေး
လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အစကတော့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ အချို့က အဆင်မပြေကျပါလို့ပါ။
ဒါလေးကို SP Flash Tool ကနေ သွင်းလိုက်ရင်ရပါပြီ။
သွင်းပြီးလို့ ဖုန်းပြန်တက်လာလာခြင်း မြန်မာစာတွေလွဲနေရင် ရိုးရိုး Restart
ရေးတဲ့အချိန် 11:42 AM4comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး MPT SIM Card များကို နိုင်ငံတစ်ဝ...